कसरि मारिए मनोज पुन ? को हुन् उनी ? - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | ९ फाल्गुन २०७४, बुधबार ०९:४६ |
बुटवल । देवदहका ईटा व्यवसायी एवं युवा संघ रुपन्देही जिल्ला अध्यक्ष दुर्गा तिवारीको हत्यापछि चर्चामा आएको नाम हो मनोज पुन । त्यसपछि काठमाडौंमा निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरद गौचनको हत्या र यहि पुस २१ गते देवदहकै काठ व्यवसायी बलु पौडेलको हत्याका मुख्य योजनाकार थिए मनोज पुन । विहान सवा ३ बजे तिर देवदह नगरपालिकाको वडा नं. ४ विजयपुर की सिता बस्याल एक्कासी गोली पड्केको आवाज आउन साथ विउझिन । सुरुमा एक दुई गोली सुनेकी उनले विस्तारै गोलीको संख्या डमडमडम आएको सुनाइन ।
भवानीपुर चोक देखि ३ सय मिटर नजिकैको ओरालामा मनोज पुन र सोम आलेको जम्काभेट भएपछि मनोजले पहिल्यै प्रहरी माथी फायरिङ खोले । उनको गोली प्रहरीको मोटरसाईकलमा लाग्यो । मनोजले लगत्तै फायर खोलेपछि प्रहरीले पनि प्रतिकार ग¥यो । प्रहरीको ईन्काउन्टरबाट मृत्यु भएका मनोज पुनःको शरिरमा प्रहरीले १२ गोली हान्यो । पेटमा मात्र ८ गोली लागेको छ । पुनको समूह नेपाल आएको सूचनाका आधारमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र प्रहरीले सम्भावित क्षेत्रमा खोजी अभियान चलाएका थिए । आज विहान खोजीकै क्रममा लुकिछिपी बसेको पुनको समूहले प्रहरीको टोलीमाथि गोली प्रहार गरेपछि जवाफी फायरिङमा पुन सहित आलेको मृत्यु भएको एसपी ज्ञवालीले बताए । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोलीका डिएसपी अंगुर जिसीको नेतृत्वको टोलीले पुनलाई इन्काउन्टर गरेको हो ।
घटनास्थलमा गोली लागेर घाइते भएका दुबै जनालाई तत्काल उपचारको लागि लुम्विनी अञ्चल अस्पताल बुटवलमा लगिएको थियो । उनीहरुको त्यही बुधबार बिहान मृत्यु भएको हो । कुख्यात गुण्डा नाइके मनोज पुन प्रहरीको मोस्टवान्टेड सूचीमा थिए । गत पुसमा उनले फर्निचर व्यवसायी बसन्त पौडेलको हत्या गरेको जिम्मा लिएका थिए ।
०७२ पुसमै युवासंघ रुपन्देहीका अध्यक्ष दुर्गा तिवारीको हत्याको जिम्मा समेत उनैले लिएका थिए । साथै निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरद गौचनको हत्यामा पनि उनकै संलग्नता रहेको बताइन्छ । पुन बिभिन्न रकम असुलीमा समेत संलग्न भएको प्रहरीको भनाई छ । उनीहरुको साथबाट पेस्तोल, ल्यापटप, फरक नामको पासपोर्ट, फरकनामकै एटिएम कार्ड सहित नक्कली नम्बर प्लेटको मोटरसाइकल समेत प्रहरी बरामद गरेको छ ।
घटनास्थलमा विहान सवा तीन बजे गोलीको आवाज सुनिएको थियो । स्थानीयहरु गोली चलेको आवाज सुने पनि बाहिर निस्किन भने सकेनन् ।मनोजलाई १२ ओटा गोली लागेका थिए । शरीरको अघिल्लो भागमा मात्रै ८ वटा गोली थिए । तिघ्रामा २, पाखुरामा १ र ढाडमा १ गोली लागेको छ । सोम आलेको शरीरमा १० गोली छन् । प्रहरीका अनुसार छातिमा ५, दाढ, पेट, खुट्टा र बाया कोखामा उनलाई गोली हानिएको छ । घटनास्थलमा मनोज पुनका तर्फबाट एउटा गोली चलेको र प्रहरीको मोटरसाइकलमा लागेको एसपी श्याम ज्ञवालीले बताए ।
झण्डै दुई वर्षअघिदेखि प्रहरीको ‘मोस्ट वान्टेड’ सूचीमा रहेका पुन अन्डरवर्लडको शैलीमा एकपछि अर्को आपराधिक घटना मच्चाउँदै व्यवसायीलाई धम्क्याएर असुली गरिरहेका थिए । उनी अन्डरवर्ल्डको शैलीमा घटनालगत्तै प्रहरी वा सञ्चारकर्मीलाई फोन गरेर जिम्मेवारी लिन्थे। ४ पुस ०७३ मा युवा संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष दुर्गा तिवारीको हत्या गरेपछि चर्चामा आएका मनोज पुनले २१ पुस ०७४ मा तिवारीका साथी बलु पौडेललाई गोली प्रहार गरे । पौडेल रुपन्देहीको देवदहका फर्निचर व्यवसायी थिए । उनले भारतमै बसेर रुपन्देहीका तिवारी र पौडेलको हत्या योजना बनाएका थिए । २३ असोज ०७४ मा भएको निर्माण व्यवसायी शरदकुमार गौचनको हत्यामा उनको संलग्नता रहेको प्रहरी बताउँछ ।
तत्कालीन युवा संघ रुपन्देहीका कार्यवाहक अध्यक्ष दुर्गा तिवारीको देवदहमा हत्या भएपछि मनोज पुन एकाएक चर्चामा आएका थिए । उनको वास्तविक नाम मनोज बुढा मगर हो । २०७३ पुस ४ गते देवदहको खैरेनीमा तिवारीमाथि गोली चलाउनसाथ उनले प्रहरी प्रमुखसहित पत्रकारहरुलाई फोन गरेर हत्याको जिम्मा लिएका थिए । त्यसयता प्रहरीले उनलाई फरार अभियुक्तको सूचिमा राखेर खोजि गरेको थियो ।
पुन रुपन्देही देवदह नगरपालिका २ का बासिन्दा हुन् । उनी युथफोर्स गठन भएको केही समयपछि युथ फोर्स रुपन्देही क्षेत्र नम्बर १ का कोषाध्यक्ष समेत भएका थिए । त्यसअघि र पछि उनी देवदह क्षेत्रमा ठेक्कापट्टाको काममा संलग्न भए । माओवादीका संगठित सदस्य देवदहकै शालिकराम चापागाईं लगायतसँग मिलेर उनले देवदह क्षेत्रमा सानातिना ठेक्कापट्टाको काम गर्थे । पाच वर्ष अघिसम्म युथफोर्समा रहँदा पनि उनले फिरौती माग्ने, गुण्डागर्दी गर्ने जस्ता गतिविधि जारी राखेका थिए । युथफोर्सको आडमा अपराधिक काम गरेको भन्दै उनलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरिएको थियो । त्यसपछि उनी माओवादीको वाइसियलसंग नजिक भए ।
पुनले ०७२ फागुन २० मा दुर्गा तिवारीमाथि पहिलो पटक देवदहकै एक इटा कारखाना नजिकै गोली हानेका थिए । तर त्यो गोलीबाट बचेका तिवारी ०७३ पुसमा सिकार बने । उनीमाथि गोली हानेको लगायत अन्य घटनाको अभियोगमा ०७३ जेठमा प्रहरीले पुनका सहयोगीहरु रुपन्देही देवदहका २७ वर्षीय शालिकराम चापागाईँ, नवलपरासी सुनवलका ऋषिराम घिमिरे, कास्कीका सन्जोग नेपाली, रुपन्देहीका राजेन्द्र धमेल, उर्गेन गुरुङ, चित्रबहादुर गुरुङ, बेनिराम सोमै, र रवि केसीलाई पक्राउ परे । ०७३ को तिवारी हत्या काण्डपछि पनि पुनले गएको साउन २० गते रुपन्देहीको मणिग्रामका टायल व्यवसायी दुर्गालाल भण्डारीको पसलमा गोली प्रहार गरी घटनाको जिम्मा लिएका थिए । उनले भण्डारीसंग ३० लाख चन्दा मागेका थिए । चन्दा नपाएपछि उनीमाथि गोली प्रहार भएको थियो ।
यो क्रममा तिवारीले रुपन्देही, पाल्पा, नवलपरासी, कपिलवस्तु र काठमाण्डौंका व्यवसायी संग फिरौती उठाइरहेका थिए । यस क्षेत्रका व्यवसायीले हुण्डीमार्फत पुनलाई रकम पठाउदै आएको बताइएको थियो । गत पुस २१ गते देवदहै फर्निचर व्यवसायी बसन्त पौडेलको पुनले हत्या गरे । फर्निचरमा काठ किन्ने नाममा पुगका दुई जनाले पौडेलमाथि हत्या गरेका थिए । त्यसयता कुनै आपराधि गतिबिधि भएका थिएनन् । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरद गौचनको हत्यामा पनि पुनको संलग्नता रहेको प्रहरीले बताउदै आएको थियो ।
पुनलाई यो क्रियाकलपामा सघाउने झण्डै १६ जना सहयोगी पक्राउ परे पनि पुन पक्राउ परेका थिएनन् । गएको वर्ष भारतका शहरमा रहेको बताउने उनले अहिले मलेसिया रहेको बताइरहेका थिए । तर प्रहरीलाई विश्वास थियो पुन भारतमै छन् भन्ने । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र प्रहरीको टोली भारतको गोवा पुगेको थियो । साता दिनअिघ अन्नपूर्णसंग कुरागर्दै एक बरिष्ट प्रहरी अधिकृतले मनोज पुन केही समयमै पक्राउ पर्ने बताएका थिए । दुई दिनअघि मात्रै तिनै अधिकारीले पुनको इन्काउन्टर हुने सूचना दिदै समाचार नबनाउन आग्रह गरेका थिए । त्यसको तीन दिनपछि पुनका सहयोगी सोम आले सहित रुपन्देहीकै देवदहमा प्रहरीले इन्काउन्टर गरेको हो ।
इन्काउन्टरमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका डिएसपी अंगुर जिसीको टोली संलग्न थियो ।पुनलाई यसअघि राजनीतिक दलकै नेताले बचाएको प्रहरीले गुनासो गर्दै आएको थियो । एमालेकै नेताको संरक्षणमा रहेको भनिएका पुनले एमालेकै कार्यकर्ता लक्षित हत्या मच्याएपछि इन्काउन्टर गरिएको सुरक्षा अधिकारीको दावि छ । सोम आले पूर्व कारावास बसेका व्यक्ति हुन । उनी मनोज समूहका सार्प सुटर हुन । पाल्पा कारागारमा कैद भुक्तान गरेका उनको परिवार भैरहवामा बस्दै आएको छ । उनमाथि प्रहरीले खुनडाका, चोरी लगायतका मुद्धा चलाइरहेको छ ।
मनोज पुनको विषयमा बोल्न चाहने स्थानीय भने निकै कम छन् । पुनको नामै लिन पनि डराउछन देवदहबासी ।
प्रहरीले श्रद्धाञ्जली सभामा जस्तै सबैलाई लाइन लगाएर फोटो खिच्ने र हेर्ने मौका दिएको थियो । मृतक दुवैका परिवारले शव बुझ्न मानिरहेका छैनन् । मनोजको घर देवदहमा ताला लागेको छ ।
Previousअष्ट्रेलियामा हुनेभो धमाका: कार्टुन्ज क्रियु, ग्रीष खतिवडा, इन्दिरा जोशी, दीपक बज्राचार्य एउटै स्टेजमा
Nextपराजुलीको जन्ममितीमा प्रश्न उठाउने डा.केसीकै प्रमाणपत्रमा फरक-फरक जन्ममिती
२५ मंसिर २०७५, मंगलवार ०४:०५
लक्ष्मीपूजाको राति छोराले आमाको हत्या गरे
१५ कार्तिक २०७३, सोमबार ०४:०५
नाति र बुहारीले खान लाउन नदिएको भन्दै हजुरआमाले हालीन् मुद्धा